Daahfurnaan waa ikhtiyaari, sax ahaanshuhu maahan | Martech Zone
Wednesday, September 10, 2014 Axad, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Dhawrkii sano ee la soo dhaafey, waxaan ku jirey mowqif xasiloon oo aan ku wadaago inta badan noloshayda shaqsiga ah khadka tooska ah. Waxaan la wadaagay wax badan oo ka mid ah safarkayga miisaanka, waxaan ka doodayaa siyaasadda iyo fiqiga, waxaan la wadaagayaa kaftanka iyo fiidiyowyada midab-ka-baxsan, iyo ugu dambayntii - waxaan la wadaagay fiidkii meel aan ku cabbay xoogaa yar. Wali ma ahan gebi ahaanba daahfuran khadka tooska ah, laakiin waxaan ahay mid dhab ah.
Waxa loogu yeero daahfurnaanta waa raaxo. Waxaan ku soo dhowaanayaa 50 sano jir, waxaan haystaa meherad ii gaar ah, waxaan ku noolahay nolol ciriiri ah oo aanan ujecleyn inaan malaayiin iska ururiyo. Saaxiibbaday waxay jecel yihiin inaan waxbadan ku wadaago khadka tooska ah meheradaha aan la shaqeeyona way i yaqaanaan oo way i jecel yihiin. Dadka kale ee is yaqaana mararka qaarkood kuma qanacsanaan… gunuunac nacasnimo iyo buffoonery ah. Waxaan haystaa saaxiibo igu filan iyo macaamiil, in kastoo, markaa dan kama lihi waxa ay dadka kale u maleynayaan.
Kama qoomameynayo inaan wax walba oo aan internetka ku haysto la wadaago. Waxaan si xoogan u dareemayaa in dadka kale ay maqlaan halgankayga oo ay arkaan wanaagga iyo xumaanta nolosha. Waxaan aaminsanahay in badan oo naga mid ahi ay ku sii wadaan shaqsi been abuur ah khadka tooska ah. Waxaan dhajinaa sawirada qoyskeena kaamil ah, cunteena saxda ah, fasaxayada ugufiican, gurigeena ugufiican… mana hubo inay runti waxtar leedahay. Qiyaas inaad tahay xirfadlayaal halgamaya ama milkiile ganacsi oo kaliya akhrinta cusbooneysiinta kadib cusbooneysiinta sida adduunku u roon yahay ganacsiguna u wanaagsan yahay maalinba maalinta ka dambeysa, waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo inay dhab ahaan u jareen tan.
My daahfurnaanta aniga maahan inaan iskudayo inaan burburiyo ama aan ku dhiso sumcadayda khadka tooska ah, waa iska iska caadi. Wax badan ayaan la wadaagayaa si aan dadka kale u ogeysiiyo inaan haysto maalmo wanaagsan, maalmo xun, maalmo cabsi badan, iyo mararka qaar guulo kale oo yar oo aan doonayo inaan kula dabaaldego kuwa kale… ama guuldarooyin aan u adeegsan karo xoogaa talo ah. Waxaan rabaa inaan noqdo mid sax ah sidaa darteed waxaan la wadaagayaa inta karaankeyga ah ee macquul ah. (Qofna ma wadaago wax walba!)
Markii aan arko nolosha qof ee khadka tooska ah oo aan arko uun kaamilnimada, waxay lumisaa xiisihii aan u qabay iyo aaminsanaantaydii inay jirto wax xaqiiq ah sawirka ay soo saarayaan. Waan caajisiyey oo hadalladooda saameyn yar ayey leeyihiin, haddii ay jiraan. Haddii ay diyaar u yihiin inay ka been sheegaan noloshooda khadka tooska ah, waxay u badan tahay inay diyaar u yihiin inay waxyaabo kale iga beeniyaan.
Waxaan ku dari doonaa in kuwa kale si fudud loo ilaaliyo maxaa yeelay waa inay maareeyaan markab adag… Waan ixtiraamayaa taas. Haddii aad ka soo kaceyso warshadaha himiladaaduna waa inaad ku hormareyso qolka guddiga, ma lihid xulasho badan. Waxaan ku nool nahay bulsho xukun badan oo farsameynta shaqsiyad xirfad leh waxay noqon kartaa baahi. Waxaana laga yaabaa inay si uun qayb uun uga noqon karto shakhsiyaddaada inaad waxyaabaha gaarka ah ka dhawrtid oo aad wadaagtid waxyaabaha guud. Labada xaaladoodba, wali way noqon kartaa mid dhab ah, in kastoo. Waxaan kaliya dhaleeceynayaa shakhsiyaadka beenta ah.
Ganacsiyadu marar dhif ah ayey kaga wada hadlaan waxyaabaha aan tooska ahayn internetka mana garanayo kuwa hufan. In kasta oo kala badh ganacsiyada oo dhami ay fashilmaan, haddana marar dhif ah ayaad ka maqashaa wax khadka tooska ah ah oo ku saabsan halganka shirkadeed illaa ay goori goor tahay. Dhaqaalaha adag, taasi waa nasiib daro. Waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay inaan waxbadan kala wadaagno caqabadaha ku jira warshadeena sidaa darteed shirkado badan uma baahna inay sameeyaan isla qaladaadkii aan sameynay.
Ujeedadaydu waa tan this haddii waxa aad wadaagto oo dhan shabakadaada bulshada, macaamiisha iyo rajadaadu ay tahay shaqsi been abuur ah in waxwalba ay qumman yihiin, aadan aheyn mid hufan oo aan lagaa aaminin. Ma tihid run. Haddii aad wax badan wadaagto waxaad halis ugu jirtaa yareynta fursadahaaga maxaa yeelay dadku waa xukun. Waa inaad heshaa furfurnaan kala duwan oo adiga iyo / ama ganacsigaagaba anfacaya. Kayga wuu fududahay inuu furmo, laakiin kaagu ma noqon karo. Si taxaddar leh ugu soco
Waxaa laga yaabaa inaan wacno istiraatiijiyadeena internetka hufnaan, waxay noqon kartaa sharraxaad ka saxsan.
Sep 11, 2014 at 9: 19 PM
Doug fiican oo cad.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan run noqoshada ayaa ah inaad ogaato cidda saaxiibbadaada dhabta ahi yihiin.
Sep 11, 2014 at 9: 24 PM
Erayada xigmada, LindaSherman!